निशान र डाट्सनको अफर,अटोमोबाइल क्षेत्रकै... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
निशान र डाट्सनको अफर,अटोमोबाइल क्षेत्रकै सबैभन्दा राम्रो योजना - सन्दीप शारदा
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडाैं असार १०
निशान र डाट्सनको गाडीमा नयाँ अफर, किन र कस्का लागि कोभिड १९ ले पुरै विश्वको अर्थब्यवस्थामा डामाडोल बनाइदियो। सबै क्षेत्र आर्थिक रुपमा समस्यामा परे।
कोभिडकै कारण अटोमोबाइल क्षेत्र पनि तहसनहस नै भयो।
नेपालमा भने लकडाउन खुकुलो भएसँगै यस क्षेत्रका ब्यवसायीहरुले नयाँ योजना ल्याएर ब्यापार उस्कान लागि परेका छन् ।
यसै विषयमा नेपालमा निशान र डाट्सन गाडी विक्री गर्दै आएको पायोनियर मोटो कर्पका निर्देशक सन्दीप शारदासँग सेतोपाटीले उनीहरुले ल्याएको नयाँ अफर, लकडाउनले पारेको प्रभाव लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ।
-लकडाउनले थलिएको अटो ब्यापार बढाउनका लागि अहिले अफरहरु आइरहेका छन। तपाईँहरुले पनि निशान गाडी विक्रीमा विभिन्न अफर ल्याउनुभएको छ? यसमा कस्ता कस्ता सुविधा र सहुलियन छन?
अहिले कोभिड १९ ले ल्याएको संकटलाई मध्यनजर गरेर हामीले हाम्रा ग्राहकहरुको आयमा केही समस्या पारिरहेको बुझ्यौं। अहिले उनीहरु खर्च गर्ने मनसायमा पनि छैनन। त्यही भएर हामीले हाम्रा ग्राहकहरुका लागि लचिलो विकल्प ल्याएका हौं। हामीहरुको उद्धेश्य भनेको तत्काल ग्राहकहरुको खर्च कम गर्ने र चरणबद्ध रुपमा आफूले पाएको सुविधा उनीहरुले भुक्तान गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिने हो।
-तपाईँहरुले विक्री गर्दै आएको अर्को डाट्सनमा पनि वाइ नाउ पे इन २०२१ अफर ल्याउनु भएको छ होइन ?
डाटसनको यो योजना सबैभन्दा बढी यस्तो ग्राकहरुलाइ उपयुक्त छ कि जो ब्यक्तिगत गतिशिलताको विकल्प चुन्न चाहन्छ। तर उ केही आर्थिक समस्यासँग सामना गरिरहेको छ।
त्यसैले हाम्रो योजनाका साथ हामी ग्राहकहरुलाई विश्वस्त गर्न चाहन्छौं। हामी उनीहरुसँग तत्काल भुक्तान नलिइकन गाडी लैजान दिने सुविधा दिन्छौं। अहिले गाडी लगेर त्यसको पैसा तिर्ने योजना ग्राहकहरुले २०२१ मा योजना बनाउन सक्छन।
-अर्थतन्त्र सिथिल छ। आम्दानी घटेको छ? यस्तोमा अटो मोबाइलको विक्रि बनाउनका लागि बढी मेहनत तपाईँहरुले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा कसरी जानुहुन्छ?
हामी सबैलाई अर्थ ब्यवस्थामा गिरावट आएको थाहा छ। आयको स्तर पनि कम भएको छ। हामी यस कुरामा विश्वस्त छौं कि जीवन अघि बढाउनका लागि आर्थिक गतिविधिलाई पनि जारी राख्नुपर्छ। ग्राहकहरुका लागि गाडी किन्न हामीहरुले सहज वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यही भएर त ग्राहकहरुका लागि डाट्सनले वाइ नाउ पे इन २०२१ अफर ल्याएको हो। निशानले पनि ग्राहकहरुको लागि वाइ नाउ पे लेटर अफर ल्याएको छ ।
अहिले तपाईँ ल्याएको अफर, पहिलाको तुलनामा के फरक छ?
हामीले जुन योजना घोषणा गरेका छौं त्यो नेपालमा निशानले ल्याएको सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव हो। वास्तवमा यो अटोमोबाइल क्षेत्रकै सबैभन्दा राम्रो योजना हो। हाम्रो पहिलाको भन्दा अहिलेको नयाँ योजनामा ग्राहकहरुले अधिकतम लाभ पाउनेछन भन्ने विश्वास हामी छ।
तपाईँको विचारमा लकलाउनले थला परेको अटोमोबाइल क्षेत्र कहिलेदेखि तंग्रिएला ?
कोभिड १९ का कारण अटोमोबाइल क्षेत्र पुर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ। हामीलाई विश्वास छ कि अटोमोबाइल सेक्टर आगामी सेम्टेम्बर, अक्टोबरतिर अल्लि सुधार आउँछ। तर हामी त्यो समयसम्म कुर्ने तरखरमा छैनौ। ग्राहकलाई नयाँ योजना ल्याएर सुविधा दिएर लाभ दिने तयारीमा छौं ।
लक डाउन खुकुलो भएपछि ब्यापारमा केही उतारचढाव आएको छ ?
लकडाउनमा आंशिक छुट दिइएको छ। ग्राहकहरु शोरुम सम्म आउने वातावरण छैन। हामीले गाडी किन्नुभन्दा अघि टेष्ट ड्राइभको सुविधा दिइरहेका छौं। । हाम्रा कर्मचारीहरुले सुरक्षा पालना गरी ग्राहकहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छन। लकडाउन खुकुलो भएपछि गाडी विक्रीमा पनि केही सहजता भएको छ। लकडाउनसँगै ३ महिना सम्म सबै गाडी विक्री बन्द थियो। विभिन्न योजना र छुटका साथ गाडी किन्न पनि ग्राहकहरुले शुरु गरेका छन।
अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राज्यले लक्जरीको वर्गमा राखेको छ? यस्तोमा सरकारले के नीति ल्यायो भने ब्यापार बढ्न सक्छ?
सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्र प्रतिको दुष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ।आजको समयमा अटामोेबाइल लक्जरी होइन एउटा आवश्यकताको साधन बनिसकेको छ।
वास्तवमा नेपालमा यस क्षेत्रमा २ लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष वा १० लाखभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्ने उद्योगका रुपमा परिणत भएको छ। सुविधा र उपकरणको सन्दर्भमा धेरै लगानी गरेको पनि छ। रोजगारी दिने मामला पनि यस क्षेत्र कुनै उद्योगभन्दा कम छैन ।
गाडी आयातमा लगाएको शुल्क, कर सरकारको राजस्वको एक प्रमुख स्रोत पनि बनेको छ। यस कोभिड १९ का कारण अटोमोबाइल क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यसकारण हामी सरकारसँग के विश्वास गर्न चाहन्छौं भने यस क्षेत्र उस्कानका लागि सरकारले नयाँ नीति नियमहरु ल्याउने नै छ।
निसानका सबै गाडीहरुमा 'बाइ नाउ पे लेटर' योजना
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १०, २०७७, १०:३३:००